Umhla My Pet » Yintoni esiyifundayo Marriage?
Ngaphandle izizathu zenkolo, ngokwemveli, abantu abatshatileyo kumzamo ekomelezeni ukuzibophelela ubomi omnye komnye. Ukususela ekupheleni kwenkulungwane yamashumi, kubekho ukuhla imitshato kwaye, kuko konke, abantu badla kutshata ebomini kunezizukulwana ezingaphambili. Nangona le meko intsha, Kefalas et. al. kwinqaku "Umtshato Ngakumbi Ukuba Kunye" , uthi ulutsha kuqhubeka ixabiso umtshato kuyibona njengecandelo ibhadlileyo amakamva. namhlanje, kusenokubakho ezinye iindlela ezingaqhelekanga ukukhetha kunokuba kokuzimanya ngeqhina, nokuba, kukho iinzuzo basebaninzi ukuba olufunyenwe nokutshata.
Umtshato uzalisekisa imfuno zabantu 'esibalulekileyo kubudlelwane obusondeleyo. Ngokunqwenelekayo, izibini ezitshatileyo zifumana ubomi ndawonye kwaye banikwe ithuba ukuba umntu ecaleni kubo njengoko bekhula endala. et Strong. al., kwincwadi ethi "The Marriage and Family Experience: Nolwalamano olusondeleyo kwindawo Elitshintshayo "uchaze ukuba umtshato nobentsapho bakutshelwe imithombo apho umntu ufumana ukhuseleko ngokwasemoyeni kunye nenkxaso. ngokusebenzisa umtshato, amaqabane amabini angabelana amathemba abo lichazele amaphupha kwixesha elizayo kwaye bafumane intuthuzelo ngexesha umngeni ngamava obomi.
Impilo jikelele kunye nempilo-ntle
Umtshato inika zombini emzimbeni nasengqondweni kwaye abantu abatshatayo yanelani mpilweni ngakumbi ngokubanzi. koko, inkxaso yentlalo lomtshato izinto zokukhusela kwizifo yesiphelo. Abaphandi Aizer et. al., kuphononongo "Ubume Bomtshato kunye Survival kwezigulane Cancer", lufumanise ukuba abantu abatshatileyo abafane thaca kunye nomhlaza, kusenokwenzeka ukuba ufumane unyango, kwaye kuyanqaba ukuya ababulawa sesi sifo kunokuba abantu abangatshatanga. Oku kuyinyaniso kuba iintlobo zomhlaza, ezifana webele, umphunga, kuqina, colorectal kunye nezinye izifo.
Abantwana sempilweni neeNtsapho
Umtshato yasekwa njengeziko yokukhulisa abantwana kwaye ukhonza loo njongo namhlanje. Ngoxa ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukukhulisa umntwana yedwa, abantwana engenamkhethe ngcono xa wakhulela ekhaya nabazali bobabini. Kuphonongo, "Omama Low-Income’ Neepateni Partnership kozinzo kunye Abafikisayo’ Socio-ngokweemvakalelo Well-being ", Bachman et. al. bathi abantwana bakhule ngendlela umzali-mbini ekhaya umboniso ngaphantsi ukukreqa kunye nokwenza-ngaphandle izimo ngexesha lokufikisa ngaphezu abantwana abakhuliswe ndikhuliswa ngumzali okanye amakhaya cohabitating. Elements akhoyo kwikhaya umzali-ezimbini ezifana uyise ngokubandakanyeka nobunzima zoqoqosho ezimbalwa ukubonelela uzinzo olukhulu lokuphuhlisa abantwana.
Umtshato unika ukhuseleko olukhulu ngezimali engatshatanga okanye akatshatanga. Ngaphandle kwenyaniso kucacile ukuba umvuzo ababini balunge ngaphezu kwesinye, abantu abatshatileyo kuba luncedo ezininzi zoqoqosho. izibini ezitshatileyo ukuqokelela ubutyebi kunye nempahla ngokukhawuleza kubantu abangatshatanga. Ukwengeza, kwinqaku "Ndiya Ngaba ... ufuna ukugcina ', Knoll et. al. ukuqinisekisa ukuba omdala izibini ezitshatileyo kusenokwenzeka ukuba negalelo zomhlala kumqeshi-based ngaphezu abantu abangatshatanga. Ucinga ukuba ucwangciso lwemali ekuqaleni ebomini kunokukhokelela imeko yezoqoqosho kamva ebomini kule Inyanga kuhle kakhulu kubantu abatshatileyo.